Abazali abaningi babhekene nesidingo sokutadisha izinto ezifana ne-ozona - izimpawu, ukwelashwa. Izithombe zalesi sifo azihambisani nento yonke eyinkimbinkimbi yesimo, okuyinto eyancipha ukuthi iphunga lomntwana liba ngumthombo wamakha evuthayo.
Ngaphezu kwalokho, izinkinga ezihlukahlukene kungenzeka ukuthi zibe nethonya elibi kakhulu enhlalakahleni.
Ngaphakathi kohlaka lwesihloko: "I-Ozena - izimpawu, ukwelashwa, ukuxilongwa" kufanele kuqala zichaze lesi sifo. Ngaphansi kokutholakala okunjalo njenge-ozona (i-roditis malodorous), kuwukufanelekile ukuqonda inqubo enemvelo, echaphazela izinambuzane ezinamangqamuzana, izicubu zomzimba ezinomzimba. Kulesi simo, ukufihla kwe-viscous secretion ngokushesha kumile ngaphakathi kwe-crust kwenzeka. Ngokulandelayo uyaphuma iphunga elimnandi.
Izinqubo ezinjalo ezimweni eziningi ziwumphumela wokuvezwa emzimbeni wezifo ezivuthayo nezifo ezithathelwanayo. Kulesi simo, iphunga elimnandi elivela ekhaleni liqedwa ngokuphumelelayo kuphela emva kokuthola imbangela yenkinga yenkinga.
Ochwepheshe abaningi emkhakheni we-otolaryngology banquma izimbangela eziningana ezibalulekile zokuqala kwe- rhinitis enonya emntwaneni.
Leli qembu lihlanganisa lezi zinto ezilandelayo:
- umonakalo emigodini yezintathu kanye nezigxobo zokuzimela;
- ukuhlukumezeka kwamathambo wesigqoko nesifuba ebusweni;
- umonakalo ku-pterygoid.
- ukuthuthukiswa kwezifo ezithathelwanayo ezifana nenkukhu yenkukhu, isishukela, i-rubella, i-diphtheria ne-red fever;
- foci esithathelwanayo engaphelele (sinusitis, rhinitis, pharyngitis, tonsillitis);
Kwezinye izimo, imbangela yokubonakala kwechibi ingaba umsoco ompofu.
Njengoba isifo esinjalo njenge-ozona, izimpawu, ukwelashwa nokuxilongwa kufanele zithole ukunakwa okukhethekile, ngoba izinqubo ezinjalo ze-atrophic zenza kube nzima kakhulu kokubili kwengane nabazali bakhe.
Futhi uma ufunda ukubonakaliswa kwechibi, ungakwazi ukuhlukanisa izigaba ezintathu eziyinhloko zokuthuthukiswa kwalesi sifo: okokuqala, isiteji sokuguqula nokugcina.
Ezimweni eziningi, isigaba sokuqala siqala eminyakeni engama-7 futhi siqhubeka kancane kancane, singabonakali izimpawu ezibalulekile. Kuphela emva kwesikhashana abazali bangaqaphela ukuthi ingane ikhuphuka emgodini wezintambo. Ekuqaleni, bangaba nama-viscous, kodwa ngemuva kwalokho bonke basathatha ifomu elihlanzekile, babe ngumthombo wamakha evuthayo.
Ngenkinga efana ne-ozona, izimpawu, ukwelashwa nezinyathelo zokuzivikela kusho ukuphendula ngesikhathi esifanele ekubonakalweni kwesifo. Izimpawu ezicacile zihlanganisa ukuphathwa ikhanda okungavamile kubantwana, ukuphazamiseka kokulala, ukukhathala okwandayo, ubuthakathaka nokunciphisa ukudla.
Kumele kuqashelwe ukuthi kunzima ukuqeda leli chibi ngesikhathi sokuqala. Ngokuhamba kwesikhathi, iphunga elikhipha ama- crusts ekwakheni libonakala libonakale kuwo wonke umuntu, kodwa kancane kancane ingane ilahlekelwa ukuzwela kuyo. Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi we-receptors olfactory uphazamiseka. Esinye isizathu sokulahlekelwa ukuzwela kumnandi kungaba hyposmia.
Ukuze isiteji sokuphakama, ukubonakaliswa kwezimpawu eziphelele kuwuphawu. Emgodleni wezintambo kunombalwa omkhulu we-crusts, okwakunzima ukususa. Ngaphezu kwalokho, kuba nzima ingane egulayo ene-ozo ukuphefumula ngekhasi lakhe. Ngesikhathi esifanayo, i-viscous liquid ikhishwa njalo. Ngaphandle kwalezi zibonakaliso, izimpawu zesigaba sokuphakama zihlanganisa ukukhathala okwedlulele nokuqina, kanye nobuhlungu ebunzini nasemakhaleni, kanye nezinga eliphansi lokuzwela ukunambitheka. Abazali kufanele baqaphele nokuthi i-nosebleeds ingenzeka echibini, futhi njalo.
Ukuqhubeka nenhloko: "I-Ozena - izimpawu, ukwelashwa ezinganeni," kufanele kuqaphele ukuthi udokotela, lapho ecubungula ingane enesifo esibandayo, ngokuvamile ulungisa izibonakaliso zokungaqhubeki kwamapiramidi ekhaleni, ama-nasal aphakanyisiwe namakha, kanye nokuqina okungavamile kwezindebe.
Ngokuqondene nesigaba sokugcina sechibi, akusizi ngalutho uma usencane. Leli fomu lesi sifo lihlelwe kulabo asebefinyelele eminyakeni engama-40. Ngalesi simo, i-crusts emphunjini nephunga nayo iyanyamalala, kodwa ngesikhathi esifanayo kunezibonakaliso ze-atrophic chronic rhinitis.
Ekhuluma ngalezi zinkinga, kufanelekile ukukhuluma nge-oze pharyngitis, i-laryngitis, i-laryngotracheitis, i-sinusitis engapheli, ehlanganisa i-frontitis, i-sphenoiditis nes sinusitis. Akunakunyulwa kanye nezinkinga, kubonakala ngezinqubo zokuvuvukala ebusweni be-eye: i-keratitis, i-dacryocystitis, i-conjunctivitis, i-blepharitis. Ukuvuvukala okungenzeka futhi kwendlebe, okufaka u-otitis ne-eustachitis endlebeni.
Ukufunda lesi sifo njenge-ozona, izimpawu, ukwelashwa kanye nezinkinga zayo, ungakhohlwa ngemiphumela yesikhathi eside yalesi sifo: i-meningitis, i-pneumonia, i-bronchitis, i-neuralgia ye-trigeminal ne-craniocephalic syndrome.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ngenxa yokugwinya i-pus efihla emgodleni, ingane ingase ibhekane nezinkinga ezihlobene nomuthi wesisu. Lezi yizinkinga ezifana ne-gastritis, ukuqotshwa, flatulence kanye indigestion.
Kulezo ziguli ezinesisu esibelethweni se-nasum esiswini, isisodwa esisodwa esisodwa singasuka. Kulesi simo, enye yezinyopho zomzimba kanye nokweluleka kwamanye kubonakala. I-algorithm yokuthuthukiswa kwechibi eyodwa-ndlela ayifani neyesilasi.
Ngezinye izikhathi ama-crusts avela ezindaweni ezingalinganiselwe emgodini wezintambo, ngaphandle kokuthinta konke. Kulokhu, ukwakheka kuvame ukurekhodwa emaqenjini angaphakathi. Ngokuvamile, lolu hlobo lwechibi lungabangela ukuba i-atrophy ngemuva kwezingxenye ezisemkhatsini. Kwezinye izimo, leli chibi alisunguli i-crust, kepha ukufihla okuvame ukusabalala kusekhona.
Omunye wemibandela yokwelashwa okuphumelelayo kwe-rhinitis engavamile yempendulo efanele futhi efika ngesikhathi ekubonakalweni kwesifo esinjalo njenge-ozona. Izimpawu zalesi sifo zibonakala kakhulu ekuphakameni kwesiteji, ukuze abazali bakwazi ukubona ngokushesha inkinga. Kodwa uma esigabeni sokuqala bekukhona ukucabanga okuphathelene nokuthuthukiswa kwechibi, khona-ke kubalulekile ukubonisana ne-otolaryngologist nokuqhuba izifundo ze-endoscopic.
I-Rhinoscopy ikuvumela ukuba unqume izinga lokunwetshwa kwezingxenye zomlomo, ikholera nama-shells. Ukubona inqubo ye-arthrofic, okuwumphumela wechibi kungaba yi-microscopy ye-mucosa yama-nasal.
Kunezindlela eziningana, ezakhelwe ukungathathi kahle kwe-rhinitis e-malodorous. Okuvamile kunazo zonke amasu okuhlinza nokwelashwa.
Izindlela zendabuko zibandakanya ukukhishwa kwamanzi, ukuqeda ukucinana nokumelela emakhaleni. Ukuze uzuze lo mphumela, ukugeza ngesisombululo se-3% se-hydrogen peroxide, isisombululo saline kanye ne-potassium permanganate.
Kungenzeka ukuqhuba i-tamponade ku-Gonshtein. Umbuzo wokusebenzisa i-tampon efakwe kwisisombululo se-glycerin futhi ifakwe emgodini wezintambo. Kule ndawo, i-tampon ishiywe amahora angu-1-2. Ukususwa okulandelayo kwalokhu kukuvumela ukuba ususe emgodini omsulwa we-crust, okuwumthombo wesiphunga elimnandi.
Ukwelashwa, lapho i-chlorophyllocarotene paste isetshenziswa khona, kufanelekile. Kubukeka kanje: kwisinus ngayinye ye-nasal ibeka ikhandlela kusukela kulolu hlangothi, ngenxa yalokho, emva kwemizuzu engu-10-15, iphunga elimnandi liyanyamalala. Lo mphumela uqhubeka usuku.
Ngokuphathelene nokwelashwa okuhlinzekwayo, kungase kuhileleke ukufakelwa kwe-autografts, ukufakwa kwezintambo zama-acrylic nokufakwa ngaphakathi kwe-mucosa ye-septum nodonga lwempumu.
Ozena: izimpawu, ukwelashwa ngama-antibiotics
Lapho ingane ithola ukuthi kunezibonakaliso zechibi, kungenzeka ukwelapha izilungiselelo zokugula neziguli eziphuthumayo. Kulokhu, ama-antibiotics avame ukusetshenziswa. Okuphumelela kakhulu phakathi kwabo kubhekwa ngokuthi "iStreomyomycin". Kungenziwa ukuphathwa nge-intramuscularly futhi ngesimo se-inhalation noma amafutha okugcoba. Kwezinye izimo, "i-Metacycline" isetshenziswa.
Esigodini, ukusetshenziswa kwesixazululo sikaLugol kanye ne-chlorophyllocarotin unamathisela kungaboniswa.
Okudume kakhulu ukusetshenziswa kwamalungiselelo ensimbi, i-nicotinic acid, "Proserin", ijusi le-aloe, umzimba we-vitreous kanye ne- "Pyrogenal".
Ngokuqondene nezindlela ze-physiotherapeutic, zingabhekiselwa ku-UHF emanzini omzwelo womzwelo noma i-endozonal electrophoresis ye-iodide ye-potassium.
Ngenkinga efana ne-ozone, ukwelashwa ekhaya akufanele kunganakwa. Ukusetshenziswa kwamasu omuntu kungasiza kakhulu ngeqhwa lomkhuhlane. Nazi izindlela ezimbalwa okufanele uziqaphele kuzo:
- Gaya esimweni se-powder sea kale futhi ngobuncane, uyifake ekhaleni kathathu ngosuku. Le nqubo izovimbela ukubukeka kwamagxolo.
- Hlanganisa izingxenyana ezilinganayo ze-peppermint, umhlonyane obabayo kanye nomswakama. Emva kokufaka ilitha lamanzi abilayo ama-5 nezinkezo ze-herbal mix. Gcizelela ukuthi badinga amahora amabili ku-thermos. Lokhu ukumnika kungasusa umlomo wakho, futhi kuyithatha nsuku zonke (izibuko ezingu-3 ngosuku).
- Nsuku zonke funa ekhaleni lakho ngamaconsi ambalwa ubisi, i-hips kanye ne-sea buckthorn. Inqubo kufanele iphindwe izikhathi ezine ngosuku.
Ngokusobala, isihloko se "ozone - izimpawu, ukwelashwa" kubalulekile kubantu abaningi futhi ngendlela ehlanganisiwe yenqubo yokuvuselela, kunamathuba onke okunqoba imiphumela emibi yalesi sifo.
Qaphela: indlela yokuphatha umphimbo obomvu